UNgqongqoshe ukhala ngodokotela 'abaqhenyela' umsebenzi | News24
UNgqongqoshe ukhala ngodokotela 'abaqhenyela' umsebenzi
Cape Town – UNgqongqoshe wezeMpilo, u-Aaron Motsoaledi, usephumele obala wachitha imibiko yokuthi kunenqwaba yodokotela bakuleli asebefunde bagogoda kodwa ababhuquza neziqu zabo emakhaya ngenxa yokuswela amathuba okuqeqeshwa ezibhedlela zakuleli.
Inhlangano iJunior Doctors Association of SA (Judasa), nedlelana neSA Medical Association (Sama), kanye neNational Healthcare Professions Association (NHPA), ikhiphe umbiko mayelana nodokotela kanye nosokhemesi abangasebenzi.
OLUNYE UDABA: Odokotela bashiye ingane nama-cleaner bengenela isiteleka
Kusolwe uhulumeni ngokuhluleka ukufaka laba emisebenzini kanye nokushoda kwamathuba emisebenzi odokotela.
Kodwa-ke uNgqongqoshe uyakuchitha lokhu njengoba yena ekhala ngabo odokotela ngokuthi bafuna ukukhetha izindawo abazosebenza kuzona, wathi ngokujwayelekile bajaha izindawo ezisemadolobheni kanti abayingeni eyokusebenza ezibhedlela ezisemakhaya.
“Isibalo esiphezulu sodokotela abasanda kugogoda bafuna ukwenza ama-interniships ikakhulukazi emadolobheni amane: iseKapa, iseThekwini, iseGoli kanye nasePitoli. Abambalwa bangakhetha iPort Elizabeth, i-East London kanye neKimberley,” kusho uMotsoaledi.
Uqhuba uthi bangu-22 odokotela bakuleli abafakwe emisebenzini kodwa bayinqaba ngenxa yezizathu ezahlukene.
Ngaphezu kwalokho uthi kunodokotela bakwamanye amazwe abangu-89 abafake izicelo zemisebenzi nathe isizathu sokungabathathi bekuwukuthi basafuna ukunikeza ithuba odokotela baseNingizimu Afrika kuqala.